CAAFIMAADKA — Gebo Gebo News
Maanta waxa aynu soo qaadan doonaa xanuunka Tayfoodh oo aad caan uga ah dalalka soo koraya, inagana bulsho ahaan inagu badan. Cudurkani waxa uu ku dhacaa hab-dhiska dheef-shiidka iyada oo uu keeno astaamo kala duwan. Cudurkan waxaa la daalaa dhacaya ku dhawaad 21.6 milyan oo qof. Dadka cudurkan u dhinta […]
Read full story → Comments Off on Arrimaha Caafimaadka: Tayfoodh (Typhoid fever
Waxa inbadan is waydiina ama inagu soo noqnoqta in wax badan ka qaldanyihiin haba maamulak cisbitaalada dalkeena taaso...
Waa qaybtii labaad ee qormadii aynu ku eegaynay dhowr calaamadood oo ay xeeldheereyaashu xuseen in haddii qofku indhihiisa ku arko ay qasab tahay in uu dhakhtar la xidhiidho, maadaama oo ay digniin u noqon karaa dhibaato caafimaad oo qofka haysa. […]
February 26, 2018, 6:45 am
Sida diinteena suubani ina farrayso guurku waxa uu dhawrsanaan u yahay qofka haddii uu yahay Nin iyo haddii tahay gabadh, sidaasi awgeed waxay diinteenu inoo bannaynaysaa in ciddii awooda inay guursato ka aan awoodina uu Ilaahay SWT tallo saarto, isla markaana uu soomo. Haddaba, Deraasad kale oo lagu soo bandhigay […]
Waxa jira dad badan oo aad u isticmaala Dawooyinka Antibiotic-ka ah kuwaasi iska cuna xilli walba isla markaana aan kala tashanin dhakhtarka. Khubarada Adduunka ee ka faalooda arrimaha caafimaadka ayaa waxay ku tilmaameen caadaysiga isticmaalka Dawooyinka Antibiotic-ka ah inay yihiin aafo baabiinaysa Dadka isla markaana ay halis ku yihiin Caafimaadka […]
January 11, 2018, 7:04 am
Isbitaalada ka shaqeynaya iskuulada caafimaadka waxaa lagu magacaabaa isbitaalada waxbarashada. Isbitaalka waxbarashada, ardayda caafimaadka, kormeerka dhakhaatiirta khibrada leh, waxay hagaajiyaan xirfadahooda bukaanka, kuwaas oo dadka qaarkood aysan jeclayn. Laakiin cisbitaaladaasi waxay sidoo kale u muuqdaan inay leeyihiin daaweyn iyo qalab cusub. Bukaanku badanaa waxay ka faa’iideystaan ​​ardayda caafimaadka, dadka deggan, […]
1.Waxay xoojisaa milixdu habka difaaca jidhka. 2.Cusbada baddu dabiiciyan waxay ka caawisaa qofka inuu si fiican u dhismo hab-dhiska difaaca ee jidhku. Sidaa darteed wuxuu qofku iska cabin karaa fayraska duriga keena iyo xumadda hargabka, elerjiga iyo xanuuno kale. 3.Hoos u dhaca miisaanka: Rumayso ama ha rumaysan, laakiin cusbada […]